अन्तत : ओलीले बोलाए शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे सचिवालय बैठक ! « Bagmati Online
अन्तत : ओलीले बोलाए शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे सचिवालय बैठक !
काठमाडौं | सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो रस्साकस्सीपछि सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् सचिवालय बैठक शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो। नेकपामा सचिवालय बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था छ। बालुवाटारमा बैठक बस्ने तय भएको र महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेकोले पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक राखेको देखिन्छ।
यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले अनौपचारिक रूपमा ध्रुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बैठक गरी सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डसहित पाँच सचिवालय सदस्यले मंगलबार ध्रुम्बाराहीमा छलफल गरी आजसम्म सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई पर्खने बताएका थिए। प्रचण्डसहित नेता आज पनि सचिवालय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नै सचिवालय बैठक तय गरेका छन्।
अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत नदेखिए अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित पाँच सचिवालय सदस्यहरू बैठक बसेर स्थायी कमिटी बैठक तय गर्ने पक्षमा थिए। केही समयअगाडि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि नेकपामा सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेको हो। प्रचण्डसहित पाँच सचिवालय सदस्यले लिखित पत्र नै बुझाएर अध्यक्ष ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। गत शनिबार बैठक बसेर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित पाँच सचिवालय सदस्यले उक्त माग गरेका थिए। मंगलबार पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सचिवालय बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए। ध्रुम्बाराहीमा बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। तर त्यसदिन प्रचण्डको प्रस्तावअनुसार सचिवालय बैठक राख्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएका थिएनन्। यद्यपि आज बैठक भने बोलाएका छन् ।